सारीमा खु’लेका मनीषा र करिश्मा ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/सारीमा खु’लेका मनीषा र करिश्मा !
काठमाडौं : करिश्मा मानन्धर र मनीषा कोइरालाबीच केही समानता छ-यी दुई समकालिन फिल्म डीभा हुन् । दुबै फेसन कन्सस अभिनेत्री हुन् भने दुबैको राज’नीतिक विचार पनि करिब उस्तै छ । मनीषाले आफ्ना आवाजमा रेकर्ड गरेको भजनको भिडियो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा यी दुबै ए’क्ट्रेस सारीमा उपस्थित भए । चर्चित अभिन्त्री कोइरालाले सुरसुधासँगको सहकार्यमा मन्त्र गायन गरेकी हुन् ।
उनले पहिलोपटक आफ्नो गायकी देखाएकी हुन् । सांगीतिक समूह ‘सुरसुधा’ सँगको सहकार्यमा कोइरालाले बिहिबार महामृत्युञ्जय मन्त्रको भिडियो सहित सार्वजनिक गरेकी हुन्। महामृ त्युञ्जय मन्त्रमा सुरसुधाका तबलावादक सुरेन्द्र श्रेष्ठको संगीत छ। करिश्मा स्काइ ब्लु रङको सारीमा ग’र्जियस देखिएकी थिइन् भने मनीषा ब्ल्याक सा’री र रे’ड प’स्मिनामा चि’टिक्क । यी दुबै अभिनेत्री सारीमा खुलेका देखिन्थे ।
यी दुईको सौ’न्दर्यको चर्चा कार्यक्रममा मात्र हैन, सामाजिक संजा’लको टाइम लाइनमा पनि भयो । पछिल्लो समय यी दुई हिरोइन नि’कट पनि हुन थालेका छन् । मनीषा र करिश्माले दुबैले मुलुकमा राजसं’स्थाको आवश्यकता पनि देखेका छन् । मनीषाको महा मृ त्युञ्जय भजन हेरेपछि करिश्माले मनीषको खु’लेर च’र्चा गरिन् भने, मनीषाले करिश्मालाई धन्यवाद दिइन् । कार्यक्रममा उपस्थिती यी दुई अभिनेत्रीले एक अर्काको प्र’शंसा गरेर थाकेनन् ।
गर्भवती नायिका प्रियंकाको साथी संग मस्ती , यो फोटोले झनै सामाजिक सञ्जाल गर्मायो हेर्नुहोस तस्बिर सहित I